Luvox (လူဗို့စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Luvox (လူဗို့စ်)
Luvox (လူဗို့စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Luvox (လူဗို့စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Luvox (လူဗို့စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Luvox® ကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဆိုင်ရာ ပူပန်သော ရောဂါ ( အပေါင်းအသင်း ကြောက်ခြင်း) သို့မဟုတ် စွဲလန်းစိတ် ကြောင့်ဖြစ်သော စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု ရောဂါ (OCD) အား ကုသရန် သုံးသည်။ OCD သည် အတွေးအခေါ်များ လုပ်ဆောင်မှုများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Luvox® ကို ဆေးလမ်းညွှန်ချက်တွင် စာရင်းပြုမထားသော ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်လည်း သုံးနိုင်သည်။
Luvox® သည် selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) စိတ်ကျပျောက်ဆေး တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှု စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု လက္ခဏာ ရှိသည့် လူများတွင် မညီမျှသော ဦးနှောက်ရှိ ဓါတုပစ္စည်းများကို Luvox® (fluvoxamine) amine သည် ကောင်းမွန်စေသည်။
Luvox (လူဗို့စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Luvox® ကို အများအားဖြင့် ညဖက်တွင် သောက်သည်။ ဆေးညွှန်းတွင် ပါသော လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်၏ ဆရာဝန်သည် သင့်အား အကောင်းဆုံး ရလဒ်များ ရစေရန် ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤဆေးကို အကြံပြု ထောက်ခံထားသည်ထက် ပိုများစွာ သို့မဟုတ် ပိုနည်းစွာ မသောက်ပါနှင့်။
သင်သည် Luvox® ကို အစာဖြင့် သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ သောက်နိုင်သည်။ extended-release ဆေးတောင့် ကို မကြိတ်ချေပါနှင့်။ ဝါးမစား ပါနှင့်။ မဖွင့်ပါနှင့်။ တစ်ခုလုံးကို မြိုချပါ။
Luvox® သောက်ခြင်းကို ရုတ်တရက် မရပ်သင့်ပါ။
Luvox (လူဗို့စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Luvox® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Luvox® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ Luvox® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Luvox® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Luvox (လူဗို့စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Luvox® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
သင်သည် alosetron, pimozide, ramelteon, thioridazine, tizanidine, သို့မဟုတ် methylene blue ထိုးဆေးကို သုံးနေပါက Luvox® ကို မသောက်သင့်ပါ။
သင်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်အတွင်း MAO inhibitor သောက်ထားပါက Luvox® မသောက်သင့်ပါ။ အန္တရာယ် ရှိသော ဆေးတုံ့ပြန်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။ MAO inhibitors များမှာ isocarboxazid, linezolid, phenelzine, rasagiline, selegiline, နှင့် tranylcypromine တို့ဖြစ်သည်။
အချို့လူငယ်များသည် ပထမအကြိမ် စိတ်ကျပျောက်ဆေး သောက်သောအခါ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံလိုသော အတွေးများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ Luvox® သောက်နေစဉ် သင်၏ တိုးတက်မှုကို ဆရာဝန်နှင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးရန် လိုသည်။
လက္ခဏာအသစ်များ ပေါ်ပါက သို့မဟုတ် လက္ခဏာများ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်းကြားပါ။ ဥပမာ စိတ်နေ စိတ်ထား သို့မဟုတ် အပြုအမူ ပြောင်းလဲခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အိပ်စက်ရ ခက်ခြင်း၊ သင်သည် စိတ်မြန် လက်မြန် ခံစားခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ နိုးကြားခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဂဏာ မငြိမ်ခြင်း၊ အလွန် တက်ကြွနေခြင်း ( စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ)၊ ပိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ သို့မဟုတ် သေကြောင်းကြံရန်၊ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်စေသော အတွေးများ ရှိခြင်း
ဆရာဝန် အကြံပြုချက် မပါဘဲ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများကို Luvox® မပေးပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Luvox (လူဗို့စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Luvox® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Luvox® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Luvox® သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
Luvox (လူဗို့စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မပြင်းထန်သော အရေပြား အဖုအပိမ့်များ
ပါးစပ်ထဲတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ နှစ်မြို့ဖွယ် မကောင်းသော အရသာ ရခြင်း
လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အထွတ်အထိပ် ရောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
သင့်တွင် အောက်ပါတို့ ရှိပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်း ခေါ်ပါ။
အမြင် ဝေဝါးခြင်း၊ လိုဏ်ခေါင်း အမြင်၊ မျက်လုံး နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အလင်း ပတ်လည်တွင် ရောင်ခြည်များ မြင်ခြင်း
ကိုယ် အလေးချိန် သို့မဟုတ် အစာ စားချင်စိတ် ပြောင်းလဲခြင်း
အညိုမည်း စွဲလွယ်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ သွေးထွက်ခြင်း
စိုးရမ်ပူပန်ခြင်း၊ ပြေးနေသော အတွေးများ၊ အန္တရာယ် ယူသော အပြုအမူများ၊ အိပ်စက်မှု ပြဿနာများ ( အိပ်မပျော်ခြင်း)၊ အလွန်အမင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်တိုလွယ်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တွင် serotonin ပမာဏ များခြင်း ဥပမာ နိုးကြားခြင်း၊ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်း၊ အလွန် အမင်း တုံ့ပြန်မှု များခြင်း၊ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တွင် ဆိုဒီယမ် ပမာဏနည်းခြင်း။ ဥပမာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စကားသံ မပီခြင်း၊ အလွန်အမင်း အားနည်းခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း၊ ယိမ်းယိုင်သလို ခံစားရခြင်း။
ပြင်းထန်သော အာရုံကြော စနစ် တုံ့ပြန်မှု ဥပမာ ကြွက်သားများ အလွန် တောင့်တင်းခြင်း၊ အဖျား တက်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နှလုံးခုန်သံ မြန်ခြင်း သို့မဟုတ် မမှန်ခြင်း၊ တုန်ရီခြင်း၊ သတိလစ်တော့မည်ဟု ခံစားရခြင်း။
သင်သည် ဓါတ်မတည့်မှု၏ လက္ခဏာများကို ခံစားရပါက အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး အကူအညီ ရယူပါ။ အရေပြား အဖုအပိမ့်များ၊ အင်ပျဉ်၊ အသက်ရှူ ရ ခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ သို့မဟုတ် လည်ချောင်း ရောင်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Luvox (လူဗို့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Luvox® သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Luvox (လူဗို့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Luvox® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Luvox (လူဗို့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Luvox® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
Luvox® သည် သင့်အတွက် ဘေးကင်းသည်ဟု သေချာ စေရန် သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
သွေးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးခဲ ရောဂါ
စိတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်ကြွခြင်း တစ်လှည့်စီ ဖြစ်သော ရောဂါ
သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ် ပမာဏ နည်းခြင်း ( လျှပ်လိုက် ပျော်ရည် မမျှတခြင်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Luvox (လူဗို့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစပိုင်း extended release ဆေးတောင့် ပမာဏ။ ၁၀၀ မီလီ ဂရမ် သောက်ဆေး အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်။
အစပိုင်း immediate release ဆေးပြား ပမာဏ။ ၅၀ မီလီ ဂရမ် သောက်ဆေး အိပ်ယာဝင်ချိန်တွင် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်။
ဆက်လက် ပေးသော ပမာဏ။ တစ်နေ့လျှင် သောက်ဆေး ၁၀၀ မှ ၃၀၀ မီလီဂရမ်။ ဆေးပမာဏကို ၄ ရက်မှ ၇ ရက်တိုင်း ၅၀ မီလီဂရမ် တိုးနိုင်သည်။ ဆေး အကျိုး ရရှိသော အများဆုံး ပမာဏ ရောက်သည်အထိ တိုးပေးနိုင်သည်။
အများဆုံး ပေးနိုင်သော ပမာဏ။ တစ်နေ့လျှင် သောက်ဆေး ၃၀၀ မီလီဂရမ်
ကလေးတွေအတွက် Luvox (လူဗို့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၈ မှ ၁၁ နှစ်အရွယ်။
အစပိုင်း ပမာဏ။ သောက်ဆေး ၂၅ မီလီဂရမ် အိပ်ယာ ဝင်ချိန်တွင် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်
ဆက်လက်ပေးသော ပမာဏ။ တစ်နေ့လျှင် သောက်ဆေး ၂၅ မှ ၂၀၀ မီလီ ဂရမ်
အများဆုံး ပေးနိုင်သော ပမာဏ။ တစ်နေ့လျှင် သောက်ဆေး ၂၀၀ မီလီဂရမ်
Luvox (လူဗို့စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Luvox® ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
Luvox® ဆေးပြား ၂၅ မီလီဂရမ်၊ ၅၀ မီလီဂရမ်၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ်၊ ၁၅၀ မီလီဂရမ်။
Luvox® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Luvox®. https://www.drugs.com/mtm/Luvox.html. AccessedMar 4, 2017.